Haddii dembi lagaa galo - Oikeusministeriö
«Om.fi Ku noqo bogii hore
Haddii dembi lagaa galo
La soo bax macluumaadka
Caawimo iyo taakuleyn
Qofkasta dembi waa laga geli karaa. Markaas way fiican tahay in aad taqaannid, waxyaabihii aad ku dhaqaaqi lahayd. Qofka dembiga laga galo xaq buu u leeyahay in uu helo caawimaad dhaqaale iyo mid sharciyeed.
Qoraalkaan waxaa lugu sharaxayaa wixii aad ku dhaqaaqi lahay, haddi dembi lagaa galo. Waxaa kale oo wax lagaagga sheegayaa sida dembiyada loo baaro iyo sidii aad adiguba u horumarin lahayd baaritaanka dembiyada.
Warbixin tafatiran waxaa ka heli kartaa saraakiisha dowladda.
Qoraalkaan waxaa qaybiya heeganka dembi laga galaha, booliska, xafiisyada arrimaha bulshada (sooshalka) iyo xarumaha caafimaadka. Qoraalkan wuxuu ku qoran yahay Finnish iyo Iswidhish (qoraalka dowliga iyo kan baahbaahsan) iyo Ingiriis, Ruush, Carabi iyo Soomaali. Carabiga iyo Soomaaliga waxaa laga turjumay qoraalka baahbaahsan. Qoraallada luuqadaha kala duwan waxaad ka heli kartaa internetka wasaaradda cadaaladda cinwaanka http://www.om.fi/.
Wasaaradda caddaaladdaWaxsaaradda arrimaha gudahaWasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada